राजसंस्था छोडेपछि……यस्तो भयो – Complete Nepali News Portal
May 18, 2017	1,164 Views
स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याएको मत देखेर लागिरहेको छ, मेरो बुवाआमा र मेरो बुवाआमाजस्तै आस्था राख्ने तमाम आमाबुवा र महानुभावहरूले नेताको रूपमा कमल थापालाई होइन, राजसंस्थालाई पो सम्मान गरेका रहेछन् ।
पञ्चायत गयो, प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्रपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मुलुकमा तन्त्रहरू थपिँदै जाँदा राजसंस्था गयो । तर, बुवा र मेरो बुवाजस्तै धेरै राजनीतिकर्मीको मनमा राजसंस्थाप्रतिको आस्था र सम्मान गएन । घरमा प्रजातान्त्रिक आस्था राख्ने सदस्यको बाहुल्य छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा छोराछोरी सबैले आफू आस्थावान दललाई भोट हाले पनि बुवाआमाले गाईलाई नै हाल्नुभो । आफूहरूले मात्र मत हाल्नुभएन मत दिनलाई अरूलाई हारगुहार पनि गर्नु भो । नेता कमल थापा र तत्कालीन राप्रपा नेपालसँग उहाँहरूको अपेक्षा हिन्दूधर्म र राजसंस्थाप्रतिको आस्थाबाहेक अरू केही थिएन । कमल थापाप्रति उहाँहरूको आदर यति थियो कि हरेक अन्तर्वार्ताहरू नछुटाई हेर्ने, उहाँका भनाइहरूमा सहमति जनाउने । अहिले हामीले कमल थापाको बारेमा राम्रो कुरा गर्दा उहाँहरू सुन्नै चाहनुहुन्न । फोनमा बुवालाई भनेँ– राजसंस्था छोडेर के भयो त ? राष्ट्रियताको कुरा त घोषणापत्रमा छ नि… हिन्दूधर्म पनि छोडेका छैनन् । उहाँले उल्टै मलाई प्रश्न गर्नु भो– राष्ट्रियताको कुरै गर्न त केपी ओली नै ठीक छन् नि, कमल थापा किन चाहियो ? आज केही सिट आउँदैमा राजसंस्था छोड्नेले भोलि योभन्दा माथि पुग्नासाथ हिन्दूधर्म छाड्दैनन् भन्ने के छ र ? अहिले स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याएको मत देखेर लागिरहेको छ, मेरो बुवाआमा र मेरो बुवाआमाजस्तै आस्था राख्ने तमाम आमाबुवा र महानुभावहरूले नेताको रूपमा कमल थापालाई होइन, राजसंस्थालाई पो सम्मान गरेका रहेछन् ।
माओवादी र मधेसवादी यी दुई दल नेपालमा एजेन्डावाला राजनीतिका कारण माथि आएका हुन् । माओवादीका एजेन्डा हेर्दा कुनै बेला यो मुलुकमा यस्तो होला र ? जस्तो लाग्थ्यो, अन्ततः भयो । संविधानसभादेखि गणतन्त्रसम्म माओवादीका एजेडा थिए । यता मधेसवादी दल तात्कालीन आन्दोलनको जगमा उभिएर आए । मधेसलाई मुख्य केन्द्र बनाए र मधेस नै मधेसी दलको एजेण्डा बन्यो । माओवादी र मधेसवादी दुवै दलहरू निश्चित एजेण्डा लिएर आँधी–बेहरीझैँ आए । एजेण्डा रित्तिँदै छ, क्रमशः सेलाउने क्रममा छन् । इतिहास लामो नभए पनि नेतृत्व राम्रो भयो भने एजेण्डा सकिए पनि राजनीतिक दलको गतिमा रुकावट आउँदैन । तर, यी दुवै दलहरूमा नेतृत्वको राजनीतिक चरित्र र व्यवहार जनताले चाहेजस्तो या नेतामा हुनुपर्नेजस्तो देखिएन । जसका कारण यी दुवै थरी एजेन्डा बोक्ने दल एकार्कामा फुट्दै जाँदा दलहरूमा परिणत भए । मधेसवादी दलका केही एजेन्डा बाँकी छन्, ती सकिनेबित्तिकै यी दलहरूको अवस्था अहिलेको माओवादीको जस्तै हुने हो । माओवादी राष्ट्रिय दल थियो र पनि निकै खुम्चियो । मधेसवादी त पहिला नै क्षेत्रीय छन्, अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ । राप्रपा नेपालसँग हिजो एजेण्डा थियो, फरक धारका बाबजुद माथि आयो । टुक्रिएको राप्रपा मिलेर एक भयो, तर एजेण्डा छोडेपछि मेलमिलापको कुनै अर्थ रहेन । इतिहास र एजेन्डा दुवै नभएपछि राजनीतिक दललाई राजनीतिको मैदानमा टिकिरहन त्यति सहज हुँदैन । – (ghatanarabichar) घटना र विचार बाट साभार
कसैलाई देखाउन होइन, कसैको देखेर बाँच्ने छु ! मार्मिक गित सहित !!
तरवारको धारमा न्यायालय